သနားညှာတာခြင်းများ ပေးလှည့်ပါ ~ အလွမ်းခရီးသည်
Thursday, January 03, 2013 ရသစာပေ No comments
အိုး . . . . . . အသင်လောက
အသင်သည် တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်ခြင်းနှင့် ပြည့်စုံပါပေသည်။
အသင်၏အရိပ်အား ခိုဝင်လာသည့် သတ္တဝါအပေါင်းတို့အား ညီမျှစွာသော မေတ္တာကို ပေးဝေခဲ့ပါသည်။
အိုး . . . . . . . အသင်လောက
ပြည့်စုံသူတို့သည် အသင့်အား ပျော်စရာကမ္ဘာလေးအဖြစ် သတ်မှတ်ကာ ချီးကျူးကြကုန်လေသည်။
မပြည့်စုံသူတို့ကား အသင့်ကမ္ဘာအား ကဲ့ရဲ့ကြကုန်လေသည်။
အိုး. . . . . အသင်လောက
ရိုးသားဖြူစင်သူတို့သည် အသင့်အား နေရာပေး ဦးညွှတ်ကာ အသင့်အရိပ်အောက်၌ ငြိမ်းအေးစွာ အိပ်စက်ကြလေသည်။
ကောက်ကျစ်လှည့်ဖြာသူတို့သည် အသင့်အား လှည့်စားတတ်သည့် လောကကြီးဟု ထိုသူတို့ လှည့်စားမှူအပေါ် လက်ညှိုးထိုးစွပ်စွဲကြကုန်လေသည်။
အိုး . . . . . .အသင်လောက
အချို့ အချို့သော သူများ၏ လှည့်စားမှူကြောင့် အသင့်အား မာယာများသော လောကကြီးဟု သမုတ်ကြလေသည်။
စက္ကန့်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲတတ်သော လူ့စိတ်များကြောင့် အသင်သည်လည်း မာယာများသော လောကကြီး ဖြစ်ခဲ့လေသည်။
အိုး . . . . . အသင်လောက
အသင်သည် အသင့်အိမ်အရိပ်အောက်တွင် နေထိုင်သူများအား တူညီသော မေတ္တာများစွာကို ပေးခဲ့သည်။
သို့သော် မေတ္တာ ခံယူသူများ၏ ခံယူပုံများအလိုက် ကွဲပြားခြားနားခဲ့လေသည်။
အိုး . . . . အသင်လောက
အသင်သည် အသင့်အား တုံ့ပြန်လာသော တုံ့ပြန်မှုအမျိုးမျိုးတို့ကို အိနြေ္ဒကြီးစွာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် အေးအေးချမ်းချမ်း ရင့်ကျက်သော အပြုံးနှင့် မပြောင်းလဲသော မေတ္တာနှင့် တုံ့ပြန်တတ်ခဲ့သည်။
အိုး . . . . . . .အသင်လောက
အသင့်အရိပ်၌ ခိုဝင်နေသော ကျွန်ုပ်၌ ကြမ်းတမ်းသော လက်တစ်စုံ ရှိနေပေသည်။
သို့သော် ကျွန်ုပ်၏ နှလုံးသားသည် နူးညံ့လွန်းပေသည်။
ကျွန်ုပ်၏ အဝတ်အစားများသည် ညစ်နွမ်းနေလေသည်။
သို့သော် ကျွန်ုပ်၏ နှလုံးသား ဖြူစင်လွန်းလှပေသည်
ထိုနှလုံးသားမှ ပေါက်ဖွားလာသော အချစ်များစွာတို့သည်လည်း ဖြူစင်လွန်းလှပေသည်။
ကျွန်ုပ်၏ ခြေထောက်များသည့် နေရာအနှံ လှည့်လည်သွားလာတတ်ခဲ့သည်။
သို့သော် လှည့်လည် လှည့်စားသော စိတ်ထားများ ကျွန်ုပ်တွင် မရှိခဲ့ပါ။
နှလုံးသား နူးညံ့၍ ဖြူစင်လွန်းသော အကျွန်ုပ်သည် လှည့်စားခံရခြင်းကို ခံနိုင်ရည် ရှိနိုင်မည် မထင်ပါ။
သို့ပါသောကြောင့် လှည့်စားတတ်သော ၊ လိမ်ညာတတ်သော၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တတ်သော နှလုံးသားရှိသူ ထိုသူတို့နှင့် ကွေကွင်းခြင်းကို စွမ်းဆောင်ပေးလှည့်ပါ။
အိုး . . . . .အသင်လောက
ကျွန်ုပ်သည် မေတ္တာထားတတ်သော ၊ သနားကြင်နာတတ်သော၊ ဂရုဏာရှင်များနှင့်သာ တွေ့ဆုံရလိုသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မှလဲ ထိုသို့သော နှလုံးသားရှိအောင် ကြိုးစားခဲ့ပေသည်။
ကျွန်ုပ်သည် အသင့်ကဲ့သို့ ကြီးမြတ်သောနှလုံးသားကို ပိုင်ဆိုင်လိုပါသည်။ ခွင့်လွတ်နားလည်တတ်သော စိတ်ထားမြတ်ကို ပိုင်ဆိုင်လိုပါသည်။ အကျွန်ုပ်အား မညာတာသူ လူသတ္တဝါတို့အားလည်း တူညီသော တုံ့ပြန်မှုမထား ခွင့်လွတ်စိတ်ထားခြင်ပါသည်။ အဃာတမထား ၊စေတနာများနှင့်သာ ထိုသူအား လမ်းမှန်ပြသစေလိုပါသည်။
အိုး . . .အသင်လောက
အကျွန်ုပ်အား ထိုသို့သော မေတ္တာမျိုး ပေးသနားလှည့်ပါ။ သီးခံခွင့်လွတ်တတ်သော ဂရုဏာစိတ်ထား ပေးသနားလှည့်ပါ။ နာကျင်လွယ်သော အကျွန်ုပ်၏ နှလုံးသားအား ရင့်ကျက်ခြင်းအပြည့်ဖြည့်၍ ရှေ့ဆက်ရမည့် ကျွန်ုပ်၏ ဘဝခရီးကို ဆက်လက်တွဲခေါ်လှည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်သည် လူသားထဲမှ လူသား ၊ ထိုလူသား ကျွန်ုပ်အား ကြင်နာစွာ စောင့်ရှောက်တတ်သော မိတ်ဆွေများဖြစ် ပျော်ရွှင်ဖွယ်သော ကမ္ဘာလေးသို့ ပို့ဆောင်ပေးပါ ဟု.................